Real Madrid oo maanta ka saartay sawirka Cristiano Ronaldo qolka labiska ee garoonka Santiago Bernabeu – Gool FM
Real Madrid oo maanta ka saartay sawirka Cristiano Ronaldo qolka labiska ee garoonka Santiago Bernabeu
Dajiye July 12, 2018
(Real Madrid) 12 Luulyo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa si tartiib tartiib ah looga dhex waayay garoonka Santiago Bernabeu ka dib markii uu ugu biiray Juventus aduun dhan 100 milyan euro ah.
Ronaldo ayaa sidoo kale mushahar ahaan u qaadan doona aduun dhan 30 milyan euro iyo heshiis 4 sano ah ee gaarsiisan ilaa iyo 2022.
Real Madrid ayaa maanta oo khamiis ah ka saartay sawirka Cristiano Ronaldo qolka labiska ee garoonka Santiago Bernabeu, kaasoo u dhexeeyay sawirada Nacho iyo Toni Kroos.
No. 7-aad ee maaliyada kooxda Real Madrid ayaa la filayaa inuu nasiib u yeelan doono saxiixa ay ka sameyn doonto Los Blancos suuqan xagaaga ee la filayo inuu badal u noqdo Cristiano Ronaldo, waxaan la filayaa inuu noqon doono saxiix muhiim ah.
Si walba sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada dalka Talyaaniga Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa in Juventus ay u soo bandhigi doonto saxaafada maalinta Isniinta ee soo aadan isagoo ah xidig cusub ee kooxda Bianconeri.
Heshiiska Cristiano Ronaldo uu ugu biiray Juventus waxay faa'iido u noqon doontaa Napoli”… Ancelotti
James Rodríguez oo xiiseenaya in markale uu dib ugu laabto kooxda Real Madrid